Maxay bixiyaan qorshayaasha laba geesoodka ah | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Caymiska Laba Geesoodka ah ee Medicare iyo Medicaid: Hel caymis ka badan marka loo eego kan Medicaid ama Medicare oo keligood ah. Context link
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (sidoo kale loo yaqaano D-SNP ama qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah) ayaa la shaqeeya qorshahaaga caafimaadka ee Medicaid. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Waxaad heli kartaa macaashyo ka badan kuwa Original Medicare. Original Medicare wuxuu daboolaa ku jiritaanka isbitaalka iyo booqashooyinka dhakhtarka.
Waa maxay labada caymis? Qorshaha laba geesoodka ah eeloo qalmi karo waa inuu ku siiyaa caymis la mid ah kan Original Medicare. Balse labada caymis ee Medicare iyo Medicaid waxa kale oo laga yaabaa inay ku jiraan macaashyo iyo s siyaado ah. Waxyaabaha ay ka midka yihiin caymiska ilkaha, aragga iyo maqalka, iyo qaar kale oo badan. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaad ka hesho dooqyo iyo dabacsanaan badan.
Waxa laga yaabaa inaad hadda haysato
Waxa aad haysan karto
Checkmark Icon Sanduuqa calaamadaynta waa la asteeyay
Ku jiritaanada sbitaalka
Dhakhaatiir badan oo la dooran karo
Isbitaalo badan oo la dooran karo
Rijeetooyinka dheeraadka ah
Macaashyada dheeraadka ah
Macashyada siyaadada ah ee wax kharash dheeraad ah ku baxaynin
Qorshayaasha UnitedHealthcare Dual Complete® waxaa ku jira macaashyo iyo sifooyin dheeraad ah oo badan. Dhammaan lacag hooseeysa oo dhan $0 oo carbuunta caymiska ah oo loogu talagalay xubnahayaga.
Haddii aad u-qalanto faa’iidada buuxda ee u qalmitaanka labada ah, waxaad heli kartaa faa'iidooyin badan oo dheeraad ah sida caymiska ilkaha, dhibco si aad ugu iibsatid alaabta OTC iyo raashinka caynisan, qalabka la socodka xaaladaha degdega ah ee shakhsiyeed, daryeelka cagaha iyo xubinnimada jimicsiga. Context link Kuwaani waa dhawr tusaale oo ah macaashyada siyaadada ah ee ku jiri kara caymiska caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Waxaad ku raaxaysan kartaa macaashyo iyo sifooyin siyaado ah sida kuwaan:
xarumaha jirdhiska Context link
Dhibcaha si aad u iibsato alaabta OTC Context link
iyo raashinka caymisan Context link
Booqashooyinka daryeelka cagta ee joogtada ah Context link
Baaritaanada indhaha, iyo dhibcaha
loogu talagalay indha xirashada Context link
Cuntooyinka la keeno guriga
(marka caafimaad ahaan lagama maarmaan tahay) Context link
Baaritaanada maqalka, iyo dhibcaha
loogu talagalay qalabka maqalka Context link
Booqashooyinka guriga ee laga helo
dhakhtar xirfad sare leh Context link
Safarada booqashooyinka daryeelka caafimaadka
iyo farmashiyaha Context link
La hadalka kalkaaliyaha diiwaangashan
kalkaaliso wakhti kasta Context link
Irbado ku daaweynta jirka iyo
booqashooyinka xanuunka chiropractic Context link
$0 ee lacagta go'an ee caymiska ee loogu talagalay
baaritaanada Context link
Gurmadka Degdegga ah ee Shaqsiyeed
Nidaamka Jawaab-celinta Context link
Iyo macaashyo kale iyo
iyo astaamaha Context link